Ozi ịntanetị anaghị enweta? Tinye ndekọ SPF! | Martech Zone
Naanị m kwagara email nke ụlọ ọrụ m Google Ngwa. Ruo ugbu a, anyị hụrụ nnwere onwe ọ na-enye anyị n'anya n'ezie. Tupu anyị abanye na Google, anyị ga-etinyerịrị arịrịọ maka mgbanwe ọ bụla, ndepụta mgbakwunye, wdg. Ugbu a, anyị nwere ike ijikwa ya niile site na interface dị mfe nke Google.
Otú ọ dị, otu ihe ndọghachi azụ anyị chọpụtara bụ na ụfọdụ ozi email sitere na ya anyị usoro adịghị eme ya n'ezie us. Emere m ụfọdụ ịgụ na ndụmọdụ Google maka Nnukwu Email Senders ngwa ngwa wee rụọ ọrụ. Anyị nwere ozi-e sitere na ngwa 2 anyị na-akwado, ngwa ọzọ nke onye ọzọ na-akwado na mgbakwunye na Onye Na-enye Ọrụ Email.
Naanị ihe m chere bụ na Google na-egbochi ụfọdụ ozi email ahụ n'ihi na ọ nweghị ike ịkwado onye na-ezipụ ya site na SPF ndekọ. Na a nutshell, SPF bụ usoro ebe ị denyere aha gị niile ngalaba, adreesị IP, wdg na ị na-eziga email n'ime n'ime ngalaba ndekọ. Nke a na-enye ohere ka ọ bụla ISP lelee ndekọ gị ma gosipụta email ahụ na-abịa site n’akụkụ kwesịrị ekwesị.
Ọ bụ nnukwu echiche - na echeghị m ihe kpatara na ọ bụghị usoro dị mkpa nke nnukwu emailers na sistemụ igbochi spam. Would ga-eche na ngalaba ọ bụla na-edeba aha ga-eme ka ọ bụrụ isi ihe wuru ọkachamara na ya ka onye ọ bụla depụta isi mmalite email ha ga-eziga. Onye obula kwesiri iji SPF! Lee ihe ederede miri emi banyere SPF na uru ya, otu n'ime ha bụ ikike iji chebe ngalaba gị ka ọ ghara itinye aha ya na ndị spammers eme ka hà ibu gi.
NDIPMỌD:: can nwere ike nyochaa njirimara SPF gị na 250ok.
Iji dee ihe ndekọ SPF gị, ị ga-aga naanị otu a SPF Ọkachamara, ngwá ọrụ dị n'ịntanetị iji nyere gị aka ịdekọ ndekọ ahụ maka gị. Mgbe ahụ ị nanị idetuo na mado ya na gị na ngalaba Ndebanye aha. Anyị na-emelite ndekọ anyị ka m na-ede post a!
Ọzọ na ndepụta m na-enyocha Igodo ngalaba. Anyị nwere nnukwu ọganihu mgbe anyị nọ whitelisted na AOL afọ gara aga. Enwere m mmetụta na agha ahụ agaghị akwụsị akwụsị! Ọ dị njọ na ọ bụ n'ezie ụlọ ọrụ a na-akwanyere ùgwù nke ga-awụlikwa elu na SPAM hoops ka!
Tags: 250oknnapụtaigbenjakịrịusoro iwu onye ozispamspam nzachaspfspf ndekọ
Nsogbu dị na SPF na NJ izipu bụ n'ezie na ọ na-emebi izipu ozi-e. DomainKeys (na ọkọlọtọ a na-akpọ ugbu a DKIM) bụ ebili mmiri nke ọdịnihu, dịka ọtụtụ ndị mmadụ na-eche; Otú ọ dị, ọ na-esiri ike ibugharị na ịkwado.